घा-उ पाकेकाे बेलामा जुकालाई चुसाउँदा पनि निकाे हुन्छ, यस्ताे रहेछ तरिका ! – Wow Sansar
घा-उ पाकेकाे बेलामा जुकालाई चुसाउँदा पनि निकाे हुन्छ, यस्ताे रहेछ तरिका !
January 3, 2021 100
घा-उ पाकेकाे बेलामा जुकालाई चुसाउँदा पनि निकाे हुन्छ, यस्ताे रहेछ तरिका ! तनहुँको व्यास नगरपालकिा–११ पोल्याङका शङ्कर कैनी घाउ पाकेको बेला जुकालाई चुसाएर नकिो पार्छन् । दूषति रगत ९पपि० जुकाले चुसी दनिे गरेकोले नकिो हुने गरेको कैनीले बताए। ॅसामान्य चोटपटक लाग्दा पन िगर्मी मौसममा पाक्ने समस्या हुन्छ त्यस्तो बेला जुका खोजेर चुसाउँछु अन िनकिो हुन्छ,’ कैनीले भने ।।
गर्मी मौसमा गाउँघरमा सहजै रुपमा जुका पाइन्छ । वशिेष गरेर पानी परेको बेला जुका सक्रयि हुन्छ । मानसि तथा जनावरको रगत चुसेर जुका बाँच्ने गर्छ। गाउँघरमा ॅबीचमा काटयिो भने पन िजुका म`र्दैन एक भाई थएिँ दुई भाई भएँ भन्छ’ भन्ने प्रचलन छ । यही प्रचलनको कारण अगुल्टोको आगोमा पोलेर जुकालाई मार्ने गरन्छि ।।
सजलिैसँग पाइने जुका वभिन्नि रोगको उपचारको लाग िहतिकारी हुने देखएिको छ । जल्लिा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तनहुँले जुकाको चुसाई ९लचि थेरापी० माध्यमबाट समेत बरिामीहरुको उपचार गर्न थालएिको छ । केन्द्रका प्रमुख डा।रामप्रवोध मण्डलले जुकाको चुसाई माध्यमबाट वभिन्नि रोगको उपचार गर्दै आएका छन् ।।
मण्डलले युरकि एसडि, टाउँकाको रौ झरेका, अनुहारमा डण्डीफोर आएका,पुरान दाद जुकालाई चुसाएर उपचार गर्दै आएको बताए । यस्तै पायल्स लगायतका रोगका बरिामीको उपचार पन िजुकालाई चुसाएर गरन्छि । आयुर्वेदमा ॅजलौकावचारण कर्म’ भननिे यो प्रक्रयिाबाट युरकि एसडिका दुई जना वरिामीलाई सफल उपचार भैसकेको डा। मण्डलले बताए ।।
कमल फूल फूल्ने क्षेत्रमा पाइने जुकाहरु उपचारको लाग िउपयोगी हुने मण्डलको भनाई छ । जुकाले चुस्ने क्रममा नस्किनिे श्रावमा हरिुडनि नामक इन्जाइम छाड्छ र शरीर` भत्रिको दूषति रगत चुस्छ । हातको औंला चलिाउने समस्या भएर औषधी सेवन गर्दा हैरान भएका नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँका अध्यक्ष ओमकार आचार्य यस माध्यमबाट उपचार गरेका छन् ।।
एक साता अघदिेख िदनिमा एक जुकालाई चुसाउँदा छालाको समस्यामा न्यूकीरण हुदै गएको उनको भनाई छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनकिमा तनहुँबाट अमरराज नकर्मीले लेखेका हुन् ।।
Prevयस्ता कुण्डली भएका व्यक्तिको हुन्छ बहुविवाह हुने सम्भावना प्रबल
Nextदुर्लभ दाहिने शंखको दर्शन गर्दा पनि मिल्छ चमत्कारी लाभ
६५ वर्षीय पुरुष र ३१ वर्षीया महिला मृ त अवस्थामा फेला